राष्ट्रपति चयनका लागि अमेरिकामा आज चुनाव हुँदै, ट्रम्प र बाइडेनमध्ये को अगाडि ?
Homeविश्व खबरराष्ट्रपति चयनका लागि अमेरिकामा आज चुनाव हुँदै, ट्रम्प र बाइडेनमध्ये को अगाडि ?
न्यूयोर्क । अमेरिकामा बहुप्रतिक्षारत राष्ट्रपतीय निर्वाचन आज हुँदैछ । चुनावपछि अमेरिकाले पाँचबर्षे कार्यकालका लागि ५८ औं राष्ट्रपति छान्नेछ । ५८ औं राष्ट्रपति छान्नका लागि अमेरिकामा हुने चुनावमा अहिलेका राष्ट्रपति तथा रिपब्लिकन पार्टीबाट उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडेनबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
हुलाक र मतदान केन्द्रमै गएर अहिलेसम्म ९ करोड ३० लाखभन्दा बढी अमेरिकीले अग्रिम मतदान गरिसकेका छन् । यो संख्या सन् २०१६ मा गणना गरिएको कूल मतको झण्डै ६८ प्रतिशत हो ।अमेरिकामा वालिग मताधिकारको संख्या २४ करोड रहेको छ । अमेरिकामा करिब १५ करोड मतदाताले मतदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो कूल मतदाता संख्याको ६२ प्रतिशत हो । मंगलबार राष्ट्रपतिसँगै सिनेट, हाउस अफ रिप्रिजेनटेटिभ, राज्यका संसद, गभर्नरसहितका लागि मतदान हुँदैछ ।
नेकपा भित्र विवाद चर्किरहेका बेला कांग्रेस सभापती देउवाले बनाए यस्तो रणनीति, देशभरका नेताकार्यकर्तामा छायो खुसियाली